January 2017 – Page2– CRM
A commission probing violence in Myanmar’s Rakhine state on Wednesday denied security forces have carried outagenocidal campaign against the Rohingya, days afteravideo emerged showing police beating civilians from the Muslim minority. Tens of thousands of Rohingya —agroup loathed by many among Myanmar’s Buddhist majority — have fledamilitary […]
အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်း OIC ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ရက်နေ့မှာ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာတွေ့ဆုံပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတည်းက စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားနေရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုအဖြေရှာဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအတောအတွင်း မြန်မာဟာ အခြေအနေကိုချင့်တွက်ဖို့ အထူးသံတမန်ကိုစေလွှတ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုပြီး လူနည်းစုအဖွဲ့အစည်းတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ လုံခြုံမှုပြန်ရရှိနိုင်ဖို့ ဖိအားပေးတောင်းဆိုဖို့ ၀န်ကြီးတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ OIC အဖွဲ့တွေဟာ ဂျနီဗာနဲ့ ဘရက်ဆဲလ်မြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာက အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ တို့နဲ့ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲမှာ အသတ်ခံ အဓမ္မပြုခံရ နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၅သောင်းအရေးကို သက်သာရာရစေဖို့လိုအပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို မြန်မာအစိုးရကငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ Cox’s Bazar ရဲ့ဒုက္ခသည် စခန်းနှစ်ခုမှာ စာရင်းပေးထားတဲ့ ၃၂၀၀၀ခန့်နဲ့ ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ထဲမှာတရားမ၀င်နေထိုင်နေတာ သုံးသိန်းခန့်ရှိပါတယ်။ […]
Posted on January 3, 2017 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
A Rohingya Muslim woman and her son cry at the Bangladeshi border with Myanmar. A video posted online Sunday showed Myanmar police officers beating Rohingya Muslim villagers. The Organization of Islamic Cooperation has scheduled an emergency meeting with foreign ministers following the disclosure Sunday ofavideo posted online of Myanmar police officers beating Rohingya […]